लामो कथा : एक रात दुइ कथा.. - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← Translated Poem : Forget me
लघुकथा : पत्रकार / लेखक / नेता →
कती पटक पढियो : 251
………………………… …………………. …………………….. …………………………. ……………………….. …
करिव साढे छ बजे हामीले दोकान बन्द गर्यौँ , काठका दुइ खापामा भोटेताल्चा लगाएर हामी उकालो लाग्यौँ , लोडसेडिंगले होला बजारमा टुकि बाहेक ठूलो उज्यालो थिएन तर पनि चन्द्रमा रुपवान थियो आज , मुस्कुराइरहेको थियो । बाटो भरी उसको प्रकाश पोखिएर बाटो नै नुहाए जस्तो थियो ।खड्काको दोकान मेरो बाट करिव पाँच मिनट जति टाढा पर्छ ।
खड्काले बाहिरै हामीलाई देख्यो , अनि कटेरो तिर इशारा गर्यो । वाँसको कटेरो दुइटा लालटिन झुण्ड्याएको ! मैले पहिले पनि यहाँ बसेर खाएको छु , दुइ तिन चोटी जव मलाई खाएर हल्ला गर्न मन हुँदैन । त्यसमाथि यहाँ खड्काकी छोरीले सर्भ गर्छे । बिहान हेर्दा स्कुल जाँदै गरेको बेला पनि देख्छु म संगितालाइ त्यतिखेर फुच्चि जस्तो लाग्छ तर सर्भ गर्ने बेलामा बिछट्टै राम्री देखिन्छे मोरी ! त्यति काले बाउकी छोरी गोरी न गोरी छे , म उसँग इत्तरिन्छु , उ प्रायश: “छ्या दाजु पनि” भन्छे ! मलाइ दाजु शब्द च्वास्स बिझ्छ । हुन त मैले दुइ तिन जना स्कुले केटासँगको गाइँगुइँ हल्ला पनि सुनेको छु उ सँगको ,छेवैको जंगलमा घाँस काट्न जाने आइमाइले देखेका रे जंगल छेवैको खोला नजिक !
जब जब उ मलाई दाजु भन्छे म “ तेरो मोबायलमा जंगल तिर पनि टावर टिप्छ !” भनेर सोध्छु । उ चुप लाग्छे । उसलाइ थाहा छ मलाइ उसको धेरै कुरा थाहा छ । उ उसको कुरा बाउ सँग भन्देला भनेर डराउँछे । तर म पत्ता लाउन खोज्छु आखिर उसको बाउ मलाइ सर्भ गर्न आफ्नि छोरी किन पठाउँछ । मेरो दिमाग मा नशा चढेपछि मलाइ आ यी वाहियात कुरा जस्तो लाग्छ अनि म सोच्न छोडिदिन्छु उसको बारेमा , जंगलको बारेमा ,खड्काको बारेमा , मोबायलको टावरको बारेमा !
आज म प्रतिक सँग छु , मलाइ संगिता सँग खुल्न अफ्ठ्यारो छ ।तर केहि छैन भोलि अथवा अरु नै कुनै दिन फेरि पनि त एक्ला दिन हरु आउनेछन्
प्रतिक बाँसको कटेरो मा छिर्ने बित्तिकै चुरोट जलायो । उसको नियमित प्रकृया हो यो । उसको पर्यायवाची हो त्यो चुरोट मलाइ लाग्छ उ कतै कतै चुरोट नै जस्तो छ जलिरहने जलिरहने अनि सिध्दिने खरानी भएर , उसको अर्को दिन एउटा नयाँ चुरोट भएर जन्मिन्छ होला शायद !!!
“ के खाने ?”
“ जे खुबाउनु हुन्छ दाइ !” प्रतिकले धुवाँ छोड्दै उत्तर फर्कायो । उसका संक्षिप्त र लिबरल उत्तरहरुको म वानि परेको छु !
“ संगिता !” मैले आवाज लगाएँ !
उ ढोका मा टुप्लुक्क देखा परी , लालटिन को पहेँलो प्रकाशमा मलाई उ अझ पहेँली लाग्छे । छोटो टिशर्ट अनि जिन्स ! जब उ गिलास उठाउने बेला मा टिशर्ट तान्छे उ केहि देखाउनलाई तान्छे कि केहि लुकाउनलाई तान्छे म छुट्याउन सक्दिन । बिहान को सेतो शर्ट र निलो फ्रक म फेरि सम्झिन्छु , “ के उ बिहान स्कुल हिँड्दै गरेकी फुच्ची नै हो त !” मन निर्लज्ज हुँदै हास्छ अनि जानी जानी झुट बोल्छ “ के को हुन्थ्यो ! “ ओठ छेउको खत पहिले थिएन उसको !करिव दुइ तिन महिना अघि देखेको मैले त्यो तर हराएको छैन !बनाइदियो होला कुन चाहिँ स्कुले सुकुलगुण्डोले , मैले शुरुमा सोधेको पनि थिएँ उसलाई “ उसले मौरिले टोक्यो भन्दी !” मैले “ फुल जस्तै लाग्यो होला नि त !” भनेर जिस्क्याएँ !
“ रोयलस्ट्याग एक हाफ , अनि दुइ प्लेट भुटन !” संगिता वाहिर निस्किई ! प्रतिक को चुरोट सिध्दिएको थिएन , उसलाई संगिता सँग पनि मतलव थिएन शायद उ लालटिन हेर्दै धुवाँ बाहिर फ्याल्दै थियो । शायद उ लालटिन सँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ ।
“खुशियाली बिजनेश बढेकै हो त दाइ ?” प्रतिक ले मौनता चिर्यो !
“ मलाइ तिमीसँग बस्न मन लागेको हो खास !” मैले उसलाई ढाँटिन !
“मेरो अहोभाग्य दाइ !” मलाइ थाहा छ उसले विहान को रुखोपन लुकाउन भनेको हो । भित्रि मन थिएन उसको आउने !
यो प्रतिकलाई कहिलेकाहिँ उत्तर दिन नसक्ने प्रश्नहरुको सुचीमा राख्न मन लाग्छ मलाई । खोस्रिन खोज्यो झन कडा , घोल्न खोज्यो झन ठोस , अनि तैरिन खोज्यो झन गहिरो भएर निस्किदिन्छ उ ! मलाई उ राम्रो काम गर्छ वाहेक के नै थाहा छ र उसको बारेमा !
“ आज साथि लिएर पनि यो कटेरोमा !” संगितालाइ प्रतिकको बारेमा बुझ्न मन लागे जस्तो थियो । उसले दाह्री काटेको थिएन ।तर कपाल लामो राम्रो जिउडाल अनि चौडा छाती सानै उमेरमा धेरै ग्यान भएकी संगिताले प्रतिकलाई जिस्क्याउनुपर्ने वर्गमा राखी क्यारे !
“ किन म एक्लै आइन भनेर तँलाई पिर लागेको ?”
“ छ्या हैन है त्यस्तो पनि , केहि चाहियो भने भन्नु है म वाहिर छु !” संगिता बाहिर निस्किइ !
“ ल दाइको आगामी जीवनको पनि सफलताको कामना गर्दै !” उसले गिलास उठायो !
मैले पनि गिलास ठोक्काइदिएँ । मलाई थाहा छैन यो गिलास गिलास किन ठोक्काउँछन् तर मैले पिउन सिके देखि ठोक्काउन पनि सिकेको छु ।
“राम्रि छे है !” मैले प्रतिक लाई मौका पारेर जिस्क्याएँ !
“को !” प्रतिकले बुझेन , वा भनौँ उ बुझ्न चाहँदैन !
“ संगिता ! “
“ए अँ राम्री छे !” उ आफ्नो गिलासमैँ ब्यस्त भयो मैले पुरुष आवाजमा नारी आकृतीको यति रुखो तारिफ कहिल्यै सुनेको थिइन !
रातको गहिराहि बढ्दै गयो हामी दुवै मात्र पिइ रह्यौँ खासै गफ भएन । लालटिन धमिलो हुँदै गए पछि मैले फेरि संगितालाइ बोलाएँ !
“ किन दाजु ?”
“ लालटिन निभ्न आँट्यो त !”
“ दश मिनट अघि बत्ति आइसक्यो !” उसले छेवैको स्विच थिची । उ अझ राम्री देखिइ । कानको ठूलो हरियो प्लाष्टिकको इयररिंग उसको गाला सँग जिस्किइ नै रह्यो । मलाइ थाहा छ अब मलाइ चढ्दै छ । सामान्यतय यस्तै हुन्छ । म जति रात गहिँरिँदै जान्छ त्यति संगिता लाई राम्रि देख्छु !
उ फेरी बाहिरिई !
“दाइको गहिरो छ जस्तो छ नी !” यसपालि भने प्रतिकले चुस्की लिँदै सोध्यो !
मैले उसलाइ नियाँले । उसको अनुहारमा भाव परिवर्तन थिएन । उ जिस्केको हैन , फगत प्राथमिकता होला , वा हुन सक्छ मेरो संगिता प्रति रुचि छैन धन्यवाद भनेर मलाई जनाउने शब्दहरु !
“ छैन त्यस्तो साह्रो पनि ! यसका धेरै छन् दोस्तीहरु !”
“एउटै मान्छेको धेरै ठाउँ माया बस्न सक्दैन र दाइ ?”
“सक्छ र , मलाइ त त्यस्तो लाग्दैन !”
“किन तँपाइ भाउजुलाई माया गर्नुहुन्न र ?” मैले प्रतिक पहिलो चोटी हाँसेको देखेँ । शायद उसलाइ पनि नशा चढ्दै छ ।
“ अरु कसलाई गर्छु त म माया ?”
“ संगिता के त ?” उसले मेरो अनुहार पढ्न खोज्यो !
“यस्तो पनि हुन्छ त माया ? ”
“खोइ दाइ कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ , म त नबुझ्ने मध्येको पर्छु !” उसले फेरि चुरोट सल्कायो !
“ हैन भन न तै पनि तिम्रो विचारमा ! “
“ यत्रो दिन देखि म तँपाइ सँग छु तँपाइलाई यो मान्छेको पास्ट कस्तो होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन दाई ?” उसले मलाई नियाल्दै सोध्यो । किन नहुनु मलाइ तर नसोध्नु भनेपछि म घरी घरी किन त्यहि कुरा दोहोर्याउँ ?
“ माया र तिम्रो पास्ट को के सम्बन्ध र ?”
“ छ दाइ एउटा कथा सुनाउँछु , निर्णय गर्ने जिम्मा तँपाइको है !”
उस्ले सल्केको चुरोट एशट्रेमा ठोस्यो । आज अर्को एउटा चुरोट जलेर सिध्दिएको छ ।
बाहिर आकाशमा जुन टल्किरहेकै होला । आज आकाशमा बादल थिएन ।ताराहरु पनि बिस्कुन सुकाए जस्तै छरिरहेकै होलान । मैले प्रतिकलाइ हेरिरहेँ । प्रतिक पनि त खुल्दै थियो।वास्तवमा मान्छेका धेरै बोक्राहरु हुन्छन् बन्दाकोपि जस्तो कुन वास्तविक उ हो पत्ता लगाउनै गाह्रो ! हरेक पत्रमा वास्तविकता भेटे जस्तो लाग्छ त्यो पत्र नउक्कुन्जेलसम्म !!!उसले एक घुट्को लगाएर शुरु गर्यो ।
“ खुशी ,एउटा यस्तो नाम दाइ जुन नाम मेरो जीवन हो भन्नको लागि पर्याप्त थियो !”
उसले अघि कुरा गरेको माया को नाम खुशि रहेछ मैले त्यसैबाट लख काटेँ ।
“ कस्को नाम हो त खुशी ?”
मैले प्रष्ट हुन फेरी सोधेँ । फेरि मेरो जीवनको हो दाइ भन्देला भन्ने पिर !!!
“बिहा हुन आँटेको थियो मेरो , मेरो कलेजको साथी पनि !” उ आफुले भख्खर रित्याएको गिलास हेर्दै चुप भयो !
“संगिता ! एक क्वार्टर अरु , अनि मुला ,गाँजर प्लेटमा !!” म फेरि कराएँ । म उसका शब्दहरुमा बिराम चाहन्न ।
“ ठूला आँखाहरु थिए उसका , एकै चोटिमा धेरै कुरा देख्थे जस्तो लाग्ने , म सँधै उसकै आँखामा अटाइरहन्छु लाग्ने , सामान्यतय कुर्ता लगाउँथी तर भिन्नै भिन्नै रंगका धेरै कुर्ताहरु थिए उ सँग ! मलाई लाग्थ्यो त्यो दिनको मेरो लक्कि कलर त्यहि नै हो ! म उसलाई देखेर ठोकेर भन्न सक्थेँ राम्रो मान्छेलाई श्रींगार चाहिन्न !”
हामीले गिलासमा फेरि थप्यौँ । संगिता अडिई एक छिन । शायद उ चाहन्छे म प्रतिकलाई प्रतिकको कोठामा पुर्याएर फेरि फर्किउँ ।तर मैले संगिताको आग्रहलाई ध्यान दिइन आज , अरु दिन भएको भए उसलाइ सर्भ गर्दा गर्दै चिमोट्न भ्याइसकेको हुन्थेँ , उ थोरै रिसाए जस्तो गरेर आग्रही आँखाले मलाइ हेर्थी तर आज म चुप नै बसेँ । संगिता बाहिर निस्किइ बिस्तारै म उसका शब्दहरुमा बाँध बाँध्न चाहन्न ।
“ उ सँधै छ बजेर पन्ध्र मिनट जाँदा चोकमा निस्किन्थी म दश मिनट अघि त्यहाँ पुगेर पर्खिरहेको हुन्थेँ । हुन त मेरो घरबाट कलेज नजिकै छ तर पनि म पर्खिन्थेँ मलाई त्यो क्लासरुम पुग्नु अघिको सय पाइला सँगै हिँडेको रमाइलो लाग्थ्यो !”
प्रतिक बगिरह्यो ! उसको आजको बगाइ अनौठो थियो मलाइ लाग्यो । मानौँ मेरा कृयाकलाप हरु कसिंगर हुन् उसको निम्ति । उ आज यसरि बग्नेँछ कि सबै कसिंगरलाई समेत बगाएर लानेछ उसको आत्माको समुन्द्रमा !
“ म उसलाई टोलाएर हेरिरहन्थेँ , उ जवाफ मुस्कानले दिन्थी । मलाई संसार भरिका शब्दहरु बेक्कार लागेर आउँथे । यहाँ सम्म कि मैले भन्न जरुरी पनि ठानिन म तिमीलाई माया गर्छु भनेर ! अचम्मको थियो दाइ त्यो सम्बन्ध !”
“ के थाहा थियो त खुशिलाई तिम्रा भावनाहरुको बारेमा ?”
यसपालि मेरो मनमाँ शंका पलायो ! उसले अन्त्य सम्म भनेन उसको मनको कुरा खुशिलाई । यसलाई बोलाउनलाई त पियाउनु पर्दो रहेछ ! केटीको जात न हो अरु नै कोहि खोजीहोली । कसरी बुझोस् मौनता खुशीले । कतोन्जेल पर्खियोस् मौनता खुशीले ?
प्रतिक एक छिन चुप भयो । म अब कसरी बुझौँ उसको मौनता म त खुशी हैन। अनि उसले फेरि गिलास रित्यायो । मैले उसको किलकिलो तल माथी भएको नियाँले । मान्छेलाइ शब्द ओकल्न साँच्चै धेरै समय चाहिन्छ , अनि बल पनि ! आज बल तरल बनेर उ भित्र छिर्दैछ । अनि शब्दहरु निक्लदैँछन् बाहिर बिस्तारै बिस्तारै !
“ थाहा थियो दाइ , सोह्रै आना थाहा थियो । उ जिस्क्याउँथी मलाई कहिलेकाहिँ शब्द प्रयोग गरेको , मलाइ राम्री भनेको पनि राम्रो भनेर ! म सोच्थेँ म किन भनुँ राम्री उसलाई ? म किन दाँजु उसलाई , किन परिभाषा दिउँ उसको सौन्दर्यलाई अनि भनिदिन्थे मलाइ थाहा छ तिमी मेरो मौनता बुझ्छ्यौ , म किन प्रयोग गरौँ यी सुका मोहर दामका शब्दहरु ?”
हो उ किन प्रयोग गरोस् सुका मोहर दामका शब्दहरु !उसले शुरुमैँ चिनाउँदा खुशि सँग उसको विहा हुन आँटेको थिय पो भनेको थियो त । बिर्से होला , अहिले मलाइ संगिता कस्ती छे भनेर सोध्यो भने पनि भन्न सक्दिन नि ! हो बिर्सिनु मेरो त्यति ठुलो दोष हैन । मैले आफुलाइ सान्त्वना दिएँ !
“तातो पानी सिद्दिएछ संगिता !” मैले फेरि आवाज लगाएँ
“ भैगो छोडीदिनु कति दुख दिनुहुन्छ त्यसलाई! अब निट खाउँ !” प्रतिकले मलाई हेर्दै भन्यो !
“ म तिमी जस्तो आँटी कहाँ छु र राजा !” मैले प्रतिकलाई जिस्क्याएँ
“ आँटी….. !”
उ हाँस्यो अनि एकछिन मौन रह्यो ! संगिताले पर्दा उघारेर हेरी पानी वास्तवमै चाहिने हो कि नचाहिने भनेर ।वा भनौँ मेरो मन पग्लिएर उसलाई हेर्नलाई मात्र बोलाएको हो कि भन्ने आशमा !
“साँच्चैको पानी भनेको !”
मैले पानीमा नै जोड दिएँ । उ जग लिएर बाहिर निस्किइ पानी तताएर ल्याउनु पर्ने होला करिव साढे दश बजेको थियो होला त्यतिखेर रात छिप्पिदै थियो । जुन उत्कर्शमा होला यति खेर आकाशमा ! बाटोमा कुकुर भुकेको मात्रै सुनिन्थ्यो । गस्तीमा परिनेहो कि भन्ने बाहेक कोठामा जान अरु डर छैन यो सानो बजारमा !
प्रतिक हाँस्यो !!!!!!!!!!!!!!
“किन तिमी आँटी छैनौ र ?”
“आफ्नो परिचयसँग भाग्ने मान्छेलाई आँटी कसरी भन्नु दाइ !”
“केहि विवशता थियो होला ! “
मैले पनि आफ्नो घुट्को छिराएँ घाँटीमा । केहि कुरा हरु तिता छन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पिउँ पिउँ घाँटी बाट उतारुँ उतारुँ जस्तो हुन्छ । यो रक्सी र उसको कथा त्यस्तै होला । मलाइ शंका छ यो कथाको अन्त्य सुखद छैन तर नशा जत्तिकै छ प्रतिकको कथा , मलाइ उसले कथा विचमै रोक्ला भन्ने पिर थियो म फेरि पनि कथामैँ फर्कन चाहन्थेँ ।
“विवशता शब्दनै कायरहरुको हो दाइ !”
“ अनि अरु भनन खुशीको बारेमा !”
“ कलेजमा ठूलै गाइँगुइँ थियो हामी दुइको बारेमा ! मलाइ त्यो सँग खासै मतलब थिएन र खुशि त्यो कुरामा रमाइलो मानिदिन्थी ! मेरा साथीहरु बेला बेलामा मलाइ जिस्क्याउँथे खुशि सँग भएको बेला । खुशि यो उनिहरुको तिमी प्रति दर्शाएको आत्मियता हो भन्थी केटाहरु गइसकेपछि । मलाइ पनि होला जस्तो लाग्थ्यो । मलाइ खुशिका शब्द शब्द साँचा लाग्थे ! मलाइ लाग्थ्यो कतै शब्दहरु जम्मा गरेर फेरि सुन्न पाउने भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला !!!!”
के भयो त खुशीलाइ यो अझै प्रश्न नै थियो । प्रतिकले यति धेरै खुशिको तारिफ गरीसकेको थियो कि मैले पनि बिस्तारै मनैँमा खुशिको आकृती कोरेँ मलाइ मेरो मन भित्रको कल्पना पनि बिछट्टै राम्री लागि !
“ फाइनल यियरमा थिएँ म मैले घरमा आखिर कुरा गरेँ यस्ती यस्ती केटी छे म मन पराउँछु उ पनि चार वर्ष भयो हामीले एक अर्कालाइ चिनेको भनेर !”
“घरबाट तँ सिध्याउँदै गर न पढाइ पहिला त्यसपछि तेरो बिहेको बारेमा सोचौँला अनि जहिले सोचौँला तहिले तँ सँग पनि सोधौँला भनेर लिवरल एन्सर नै आयो दाइ ! म घर तिरबाट लगभग लगभग पार भएँ दाइ !” उसले चुस्कि लियो । अनि गोजीमा हात हाल्यो । मलाइ थाहा छ उसले चुरोट खोजेको हो अब । धेरै बेर भएको थियो चुरोट नसल्काएको ।
उ चुरोटमा भुलीरहेको बेला मैले सोचेँ प्रतिक खुशीलाइ मन पराउँथ्यो , खुशी पनि प्रतिकलाइ प्रतिक को घर बाट विरोध थिएन खासै कहाँ छ त यो कथामा दुर्घटना ? उसले भन्नेछ शायद अहिले।
छेवैको झ्यालको खापा एउटा वेगले खोलेर आवाज सहित फेरि बन्द गर्यो । बाहिर जोड बतास चलिरहेको छ , मलाइ थाहा छ त्यसमाथी त्यो झ्याल भएको पाटो खुल्ला छ । हावाले मनपरी गर्ने , मडारिने ठाउँ पाएको छ त्यता ! त्यति भएर होला हावा आवेग पोखिरहन्छ त्यो झ्यालमा । झ्याल छटपटिन्छ तर झ्यालको नियति उ त्यहि कटेरोमा जोडिएको छ । वर्षौँदेखी त्यो खापा मा चुकुल छैन मलाइ थाहा छ । त्यो क्रम भंग गर्ने एउटा साधन बनेको छ यो बाँसको कटेरोमा ! हुन त त्यो झ्यालको पछाडी पहरा मात्रै छ , धेरै पर त्यहि पनि ! तर पनि त्यो कोठामा अचानक छिर्ने बाहिरको उज्यालोले कसै कसैले मलाइ चिहाइरहे जस्तो लाग्छ । संगितासँग भुलीरहँदा जब जब त्यो झ्याल खुल्छ म मेरी श्रीमति सम्झिन्छु एक चोटी झस्किन्छु संगिता उठ्छे ।सकपकाउँदै , आफ्ना लुगाहरु मिलाउँदै अनि झ्याल लगाउँछे । उसलाइ पनि त्यति बेलाको उज्यालो मन पर्दैन ! म एक छिन संगितामा केन्द्रित हुन सक्दिन मेरो मन बाँडिन्छ त्यति खेर तर विस्तारै बिस्तारै तान्ने कला संगिता सँग छ । उ बिस्तारै बिस्तारै मेरो तन मन लाइ म तिर डोर्याउँछे । झ्याल को खापा पुरा बन्द भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाइ त्यतिखेर !!!
प्रतिकले चुरोट सिध्यायो एष्ट्रे मा अर्को एउटा जलेको ठूटो थपियो !
“ अनि !” मलाइ प्रतिक अझै धेरैबेर रोकिएला भन्ने पिर थियो !
“ तँ आटी छैनस् ! “
एक दिन खुशी बाट छुट्टिने बित्तिकै मेरो मिल्ने साथीले नै मलाइ प्याच्च भन्यो ! म आज सम्म पनि केलाइरहन्छु कसरी मौनता र कायरता पर्याय हुन्छन्
“ किन ? “
मैले पनि उ सँग उत्तर मागेँ !
“त्यत्ति राम्री गर्लफ्रेण्ड तर पनि ……………. “
मैले उसलाइ विचमैँ रोके ! उ झगडा हुने डरले चुप भयो । हरेक केटो भित्र एउटा अचम्मको मान्छे लुकेको हुन्छ दाइ जसले नाता बुझ्दैन जसले स्त्री सँगको सम्बन्धको सामिप्यता के हो बुझ्दैन जसले केवल भौतिकता बुझ्छ ,शरीरको आवश्यकता बुझ्छ , एकान्तमा पुरा नहुने इच्छाहरुको पोको बुझ्छ हो जीवनमा त्यो पनि अपरिहार्य होला दाइ शायद त्यसैलाइ हामी पुरुषत्व भन्छौँ , उसले मलाइ बुझ्ने भाषामा होस् नबुझ्ने भाषामा होस् नामर्द भन्यो ! जसको कारण खुशी सँगको सम्बन्ध थियो । उसलाइ मैले त्यो दिन सम्मका खुशीसँग बिताएका पलहरुको बारेमा बताएको थिएँ ! खुशी सँग साटेका शब्दहरुको बारेमा बताएको थिएँ अनि खुशी सँग साट्न नसकेका शब्दहरुको बारेमा बताएको थिएँ !त्यो दिन उसले मैले गरेका कुराहरुको आधारमा मलाइ नामर्द भन्यो !”
उसको कथाले अचानक एउटा प्रश्नचिन्ह खडा गर्यो । के उसले खुशीसँग…………. ! उसले त चार वर्ष अघि देखिको सम्बन्ध भन्छ ,कसरी ? अघि वानी परेको भए पनि त उसलाइ सजिलो हुन्थ्यो होला उसको भनाइ अनुसारको मेरो पुरुष मनले मलाइ सुझाव दियो । मलाइ थाहा छ न म न मेरो पुरुष मन नै उसलाई यो सुझाव दिन सक्छ । म मात्र सोच्न सक्छु यस्तो भइदिएको भए ठिक हुन्थ्यो प्रतिकलाइ भनेर सम्म ! अहिलेसम्म त शब्द पनि साट्न नसकेका कुराहरु गर्दैछ !अरु कुरा साटोस् कसरी ! आखिर प्रतिक म पनि त होइन , जसले एउटा स्कुले केटीमा समेत यौवन देख्छ ।बिहान देख्दै गरेकी फुच्चे केटीलाइ अचानक राती राम्री वैँशालु देख्छ । अनि विहान फेरि उसको फुच्चे अनुहार हेर्नुपर्ला भनेर झिसमिसेमा हराउँछ उसको जीवनवाट !
“ तर उसका शब्दहरु मेरो मुटुमा गाडिए दाइ ! म राती पल्टिएर धेरै बेर सोचेँ ।त्यो दिन मलाइ लाग्यो मेरो मुटुमा आज एउटा धरहरा गाडीएको छ जसलाइ म पल प्रतिपल उखालेर फ्याल्न खोज्दैछु । म बिर्सिन्छु त्यो धरहरा हो जसको अघि म स्वयं को एउटा विन्दु वरावरको अस्तित्व छैन तै पनि उखाल्न खोज्छु प्रयासरत भएर !”
उसका शब्दहरु म बाट गुज्रिरहे ! बाहिरको रात आज जुनेली देखिएको मात्र हैन रात त आज निख्खर कालो छ ।
“ भोलिपल्ट त्यो साथी भेटिँदा मैले टाउको बटारेँ , उ नजिकै आएर माफि माग्यो ! उसलाइ कुन आधारमा म माफ गर्न सक्छु मलाइ थाहा थिएन । मलाइ थाहा छैन उसको दोष के हो ? मलाई थाहा छैन स्वयं म दोषी हुँ की हैन । मलाइ थाहा छैन मायाका आवश्यकताहरु के के हुन् ! उसका शब्दहरुले एउटा छुट्टै अस्तित्व बनाएर गए मेरो जीवनमा । उ मलाइ पर्खाल ठानेर पुछ्न खोज्छ । म भित्र उ छिरेर कसरी पुछोस् दाइ । कसरी उखालोस् त्यो धरहरालाई जसको लागि मै असिनपसिन भएको छु ! तै पनि मैले उसलाइ माफि दिएँ । ”
प्रतिक खिसिक्क हाँस्यो !
“अनि खुशीलाई थाहा भयो यो कुरा !” मैले कथावाट निष्कर्ष निकालेँ !
“ कथा सिद्दिएको छैन दाइ !”
मेरो निष्कर्ष प्रति प्रतिकले आपत्ति जनायो ! उ झ्यालको छेवैमा गयो अनि अघि बन्द गरेको झ्याल बिस्तारै खोल्यो । बाहिर आकाशमा तारा हरु थिए । चन्द्रमा सम्पुर्ण उपस्थिति जनाउन चाहन्थ्यो ! तर आजको रात निख्खर कालो छ । दिउँसो को निलो आकाश अँध्यारोले पोतेको छ । तारा हरु त्यो अँध्यारोमा लागेको दाग जस्तो । हावा सुसाइरह्यो , मानौँ उ झ्याल छेउमा गएको प्रतिकलाइ आफ्नो कथा सुनाउन चाहन्छ । प्रतिक बिस्तारी नै भए पनि हावालाइ पनि चुरोटपान गराइरह्यो !
“ बिस्तारै बिस्तारै म भित्रको पुरुष उसका शब्दहरु सहि सावित गर्न तिर लागे ! मैले एक दिन दुइ दिन गर्दै आफु भित्र युद्द छेडिएको थाहा पाइन ! उ म सँग माफि माग्दै थियो । अब मैँ सँगको युद्द तै पनि एकै कारणमा घरी म को सँग माफि माँगुम थाहा हुँदैनथ्यो । म भित्रको पुरुष सोच्थ्यो त्यो मायाको आवश्यकता हो । जब दुवै जना आत्माले एक अर्कालाई आफ्नो मानिसकेका छन् भने शरीर के हो र ? साटासाटै त हो !”
म मनमनै मख्ख परेँ । अब उ मलाई सहि सावित गर्दै थियो ! आखिर सत्य त त्यहि नै त रहेछ । उ पुरुषको नाम देओस् जे भनोस् । उसले अघि भनेका मायाका कुरा सबै बेक्कारनै त हुन् ! माया को प्रमाण भोगाइ हो मेरो विचारमा ! नभोगेका , नदेखेका ,नबोलेका कुराहरुको पनि संसार हुन्छ काहिँ । मान्छे कहिल्यै कल्पनामा बाँच्न सक्दैन । म घरमा हुँदा होली मेरी श्रीमती सर्वेसर्वा तर यहाँ संगिता वास्तविकता हो !!!
“ अनि !”
“ त्यसपछिका खुशिसँगका भेटहरुको बारेमा मैले कसैलाई केहि भनिन ! त्यो साथीलाई पनि ! खुशीलाइ मैले सुनाएँ हाम्रो कुरा मैले घरमा गरीसकेको छु भनेर ! अनि घरमा पारित पनि भयो भनेर ! तर त्यो खबर मैले उसलाई अब छुट छ भनेर बुझाउनलाई मात्र भनेको थिएँ होला जस्तो लाग्छ अहिले ! उ कुराहरु बुझ्दिन थीइ , मख्ख पर्थी ! म विवाह अघि तिमीसँग यो चाहन्छु भनेर भन्न सक्दिनथेँ , उसले त्यसपालीको मेरो मौनता बुझिन दाइ !”
मान्छे कहिलेकाहिँ कति निरिह हुन्छ । तर त्यो उसको मुर्खताको कारणले त हो ! हो उ खुलेर कुरा गर्न सक्दैन । जावो केटीलाइ रमाइलो गरौँ भन्न नसक्ने लाछि मोरो ! मलाइ मन मनै प्रतिकलाई यहि भन्न मन लाग्यो !
हिजो सम्म देखेको उसको शालिन अनुहार मलाइ कायर लाग्यो ! यो केटो भिँड सँग जुध्न नसकेर यहाँ आएको हो ! सामर्थ्यहिन यसको लक्षहिन जीवन त्यहि भएर यहाँ हल्लिरहेको छ । तर जब यसले संसार बुझ्नेछ ढिलो भइसकेको हुनेछ । अपशोच म उसलाइ बुझाउन पनि त सक्दिन ! उसले अघिको साथी जस्तै अहिले अधुरो रहेको कथा आधा मैँ छोड्यो भने ! उसको पुरा कथा सुन्नु मेरो लागी अत्यावश्यक छ !
“ टाढैबाट पनि उसलाइ महसुस गर्ने मनले पहिलो चोटी उसको स्पर्श चाह्यो दाइ ! मन त्यति तल झर्यो ! म उसको नजिक जान्थे उसका कपाल हरु सुम्सुम्याउँथे उसलाइ आपत्तिजनक नलागुन्जेल उ पनि प्रतिकृया देखाउदिनथीई ! तर जव उसलाई आपत्ति हुन्थ्यो उ मेरो आँखामा हेरिदिन्थी ! म उसलाइ त्यो अनजानमा भएको भनेर देखाउनलाई एउटा अबोध बालक जस्तो केहि थाहा नपाएको जस्तो वनीदिन्थे , उ सँग देखेका रातका सपनाहरु पनि स्वरुप बदलेर आउन थाले त्यतिबेला ! उ शालिन बाट मादक देखिइन थाली मेरा सपनाहरुमा पनि ! सपनामा जस्तै मेरो जीवनमा पनि त जोर थिएन यसपाली मेरो !”
हो ,पक्का हो उसको मुटु जलेको छ !मैले एशट्रे हेरिरहेँ ! त्यहाँ उसले फ्यालेका ठूटाहरु मात्र हैन शायद उ पनि खरानी भएको छ !
“ मान्छे , उही मान्छे थिएँ म ! तर एउटा भयले भरिएको निर्लज्जता थपिएको , उसँगका आग्रहहरु म तँपाइ लाइ कसरी भनौँ दाइ , अचम्म मलाइ अहिले लाग्छ जव म खुशीको कपाल बाट गाला सुम्सुम्याउँदै उसका अंगहरुमा खेल्न चाहन्थे खुशीको एक आँखाको अविश्वासी इशाराले समग्र मलाइ रोक्दथे लाग्थ्यो मलाइ मेरा अंग प्रत्यंगका , मेरा सलबलाउन खोज्ने मनका , मनको इच्छा मा हल्लिन खोज्ने चिप्लिन खोज्ने हातका , अनि कता कता काउँकुति लागे जस्तो हुने मेरो शरीरकै स्वामीनी उसका आँखाहरु हुन । ति आँखाहरु एउटा रिमोट हुन , जसले अचानक मलाइ “स्ट्याचु” भनेर कराउँदैछन अनि म नतमस्तक भएर हार्छु कि भन्ने डरले हल्लिन्न ! हिजो भन्दा त आज खुशी शक्तिशालि छे नी आखिर मेरो जीवनमा !!! के त्यो मेरो कायरता थियो जसले मलाइ रोकेको थियो ? त्यहि मैले भन्ने गरेको पुरुषत्वको अभाव थियो वा खुशि प्रतिकोको मेरो मायाको शुद्दता थियो जसमा जव सम्म खुशिका आँखामा समर्पण आउँदैनन् प्रश्नहरुको सट्टा अहँ हुन्न भनेर म भित्रबाट चिच्याइरहन्थ्यो !!!!
मन भित्रको घाउ गुम्सेर पाकेको देख्नु भएको छ दाइ ?”
मैले अहँ भनेर टाउको हल्लाइदिएँ ! शोधकर्ताहरुको शोधको विषय हुन सक्छ मेरो मन छ कि छैन भनेर !!!!
“एक दिन विवश भएर मलाइ नामर्द भन्ने साथीलाइ मैले मेरो हालत वताएँ !!!!”प्रतिकले कथा रोकेको थिएन !!!
मेरो मनमा फेरि उथलपुथल मच्चियो कथाको नयाँ मोडले । कथाको सफलता त्यो हो जसले श्रोतालाइ , पाठकलाइ भविष्य सोच्न वाध्य तुल्याउँछ । कथा अधुरै भएता पनि श्रोताहरु अन्त्य चाहन्छन् । प्रतिकको कथा जति मलाइ बाँध्न सक्ने केहि छैन । यसले त चुलबुले , लाडिइने मेरो छातीमा एउटा न्यानोपन भर्ने संगितालाइ पनि एक दिनलाइ म बाट टाढा तुल्याएको छ ।
कथाको गर्भमा अझै धेरै कुराहरु थिए ,के प्रतिकले हल्लाको बिउ रोपेको थियो त आफ्नो साथीलाइ त्यो कुरा सुनाएर ! मलाइ चिसो भएर आयो अब प्रतिक नामर्द भएको कुरा आउँछ त्यो कथामा ! समाज हल्लामा विश्वास गर्छ अनि भिँड पनि , खुशि त्यो भिडमा छ छैन ???
“ उसले टुलुटुलु मेरो आँखामा हेरिरह्यो केहि नबुझेजस्तो गरेर , मलाइ थाहा छ उसको लागि स्त्री एउटा देह हो कला हो जसलाइ हेरिनु पर्छ आँखाले भ्याउन्जेल हरेक इन्द्रियहरुमा उ संचार भर्छे , तर त्यो क्षितिजमा गएर उसको परिभाषा समाप्त हुन्छ अनि त्यसपारिको उत्तर म माग्दैछु ! उसको लागि अन्सल्भेबल !!!!!
“ह्या त्यस्तो पनि हुन्छ र !” मलाइ थाहा छ उसले सुनीसक्ने वित्तिकै यस्तै आश्चर्य प्रकट गरेको थियो !
“ अनि ?” मैले उसलाइ विश्वास दिलाउन चाहेँ मलाइ थाहा छ मैले उसलाइ विश्वास दिलाउनु र नदिलाउनुले मेरो मनोभावमा केहि परिवर्तन आउँदैन । तर पनि त्यो निरर्थक कोशिश भयो म बाट !
“खुशीलाइ तेरो कुरा थाहा छ बुझिस् !”
“कुरा भन्नाले ?”
“ तँ खुशीसँग के चाहन्छस् भन्ने कुरा ! उसले मात्र बुझ पचाएकी हो ! पुरुषका आग्रह हरु नारीले सवै आँखाबाट बुझ्छे केहि थाहा नहुने जस्तो लागेपनि ! त्यो दैवको त्यस्तो संरचनाहो जसले पुरुषलाइ आग्रहि , नारीलाइ जिद्दि , पुरुषलाइ मुर्ख र नारीलाइ चतुर बनाएको छ ! त्यो मायामा शुद्दता , विकार भन्ने कुरा केहि हुँदैन हेर ! आत्मा मिलेपछि शरीरलाइ के को टण्टा तँ बाट जोड नपुगेको हो वा जोड गर्ने तरिका नमिलेको होला कुरा त्यत्ति हो !” उसले व्याख्या गर्यो !
मैले सोचिरहेँ दाइ , कसरी भनौँ म खुशीले बुझ पचाउँछे , पक्कै मेरो आग्रहको दोष होला !!!! केहि मेरा गुण ,लक्षणहरु मिलेनन् होला !!!! उ वत्तिस लक्षणले युक्त भएकीमा म एक लक्षणनै कम भए पनि त उसले दाज्नेछे ! थोरै शालिन बार्गेनिंग गर्नेछे ! “
“ खोइ के के कुरा हो के के !” यसपाली मैले प्रतिकलाइ विचमैँ रोकेँ !
“किन र दाइ ?”
“तिमीले मलाइ मायाकै परिभाषा नबुझ्ने बनायौ !”
“ कसैले बुझेको छु भन्छ भने मुर्ख हुन्छ दाइ !”
प्रतिक हाँस्यो ! उसको हाँसो गहिरो थियो ! मुस्कानमा केहि रंगहरु घोले जस्तो गाढा , अँध्यारा रंगहरु जुन पोतिएर क्यान्भाषमा रात बनाइन्छ होला त्यस्तै त्यस्तै !
“ उसको भनाइमा खुशी बार्गेनिंग गर्दै थिइ । प्रत्येक नारीमा प्राकृतिक समर्पण लुकेको हुन्छ जसलाइ उ सकेसम्म लुकाउन चाहन्छे । जसलाइ यो लुकाउन आउँदैन उनीहरु बेचिन जान्दैनन् !
त्यो समर्पणको मुल्य नै त हो समाजले तोक्ने ! समाज ब्यापारी हो अरे दाइ !”
मैले झट्ट संगितालाइ सम्झेँ ! उ हाँसेको सम्झे खिसिक्क ! मिलेको दाँत रातो ओठ , तल कसैले खत बनाइदिसकेको छ तर पनि त्यो ओठमा एउटा निश्छल मुस्कान छैन ! उसलाइ निर्लज्ज भएर जिस्क्याइको शुरुवात गर्न आउँदैन तर उसको कमजोरी उ बुझ पचाउन जान्दिन आफुतिर बढेका बाढीहरुलाइ अन्त तर्काएर वाढीलाइ नै मुर्ख बनाइदिन उ जान्दिन ! भनौँ आफ्नो मुल्य तोक्न उ जान्दिन !
उसले आफ्नो समर्पणको मुल्य बुझकी रहिनछे ! उ म सामु आउँदा उ आफू मुल्यवान बस्तु नसम्झी मलाइ पारखि भएकाले मुल्यवान हो यो भन्ने भ्रम मा आउँछे संगितालाइ थाहा छैन सबै ठाउँमा एक्सपेरियन्स चल्दैन !
“खुशी सँगको मेरो व्यवहार प्रष्ट नभएर ममा कम्प्लिकेसन आएको हुने सम्भावना कति छ !” एक दिन मैले त्यहि साथीलाइ सोधेँ !”
त्यो सोध्न जरुरी कुरा हुँदै हैन ! त्यो स्वयं सिद्द थियो कुरा !तर यो त उ आफुले आफैलाइ सोध्नु पर्ने कुरा हो मैले मनमनै सोचेँ ।
“ उसले हो तेरो व्यवहार प्रष्ट नभएर नै हो ! भनेर भन्यो !”
मैले खुशीको बारेमा सोचे उसलाइ थाहा छैन उसको आफ्नो भनाउँदो उ बाट के चाहन्छ । उ चाहन्छे दुइ जनाको सम्बन्धको विचमा सामाजीक मुल्य मान्यता कसैका हल्लाहरु तगारा नबनुन । उनीहरु सँग सिंगो भविष्य थियो त उसले त्यो कुरा गलत सोची भनेर पनि कसरी भनौँ । यो प्रतिक आफु भित्रै अल्झिएको छ यसरी कि उसले खुशीको बारेमा सोच्ने फुर्सद सम्म पाएन ! कस्तो स्वार्थी मान्छे फेरि अचानक मेरै मनको अर्को कुनाले हाँस्दै प्रश्न गर्यो ! तँलाइ तेरो स्वास्नीको रातको प्रहारका एक्ला सुस्केराहरुको बारेमा थाहा छ कुनै अबोध तर चंचल देहसँग खेल्दै गरेको बेला ! तँ पनि त स्वार्थि होस् त्यसो भए ! त्यसपछि हारेर कायर भएर म मेरो दायरामा आउँदै सोचे ,,, होस् प्रतिककै कथा सुन्छु सोच्दिन म खुशीका कुराहरु !!!!!!!!!!!!!!”
“ मैले उसलाइ हेरेँ उ प्रष्ट छ , उसका विचारहरु प्रष्ट छन् त्यसको अघि एउटा आफै मा अन्तर्द्वन्द मा घेरिएको एउटा अस्तित्व छ जो हुनु नहुनुको धेरैलाइ मतलव छैन ! म आफुमा भाँसिदै भाँसिदै आफ्नो टेक्ने धरातल खोज्दै पाताल पुग्न आँटेको बेला छ !
मैले उसको प्रष्टताको खुलेर उसको सामु तारिफ गरेँ ! उसको पुरुषत्वको तारिफ गरेँ , अनि उसले प्रतिपादन गरेका सवै नारिवादी चिन्तनहरु सहि छन् भनेर स्विकारीदिएँ !!! मलाइ थाहा थियो उसको कमजोरि ! उ प्रशंसा पचाउन सक्दैन थ्यो ! उ फुल्दै जान्थ्यो जव म उसमा प्रशंसाका शब्दहरु पठाउँथे ! मलाइ कहिले काहिँ लाग्थ्यो मेरो प्रशंसा वजन बनेर किलो किलोका दरले उ भित्र छिरिरहेका हुन्छन् !”
प्रतिक धेरै बेर चुप भयो !
“ अनि अनि के भयो त ?” मेरो ब्यग्रताले सिमा नाघेपछि मैले बुझ्न चाहेँ के का लागि थियो त यति धेरै प्रशंसा उसको ?
“ अनि अन्त्यमा मैले उ सँग सोधी छाडेँ , मलाइ ति सबै कुरा सिक्न मन छ जुन मैले अहिले सम्म भोगेको छैन ! माया नमिसिएको भोगाइबाट केहि सिकेर त्यसमा मैले माया मिसाएर खुशीलाइ दिन सकेँ भने शायद !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
खुशीले नबुझेकी होला वा उ जिद्दि होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर म मेरो प्रस्तावको भाषा परिवर्तन गर्न चाहन्छु ! एउटा सिकारुले आग्रह गरेको भन्दा कुशल भएर प्रदर्शित हुन चाहन्छु खुशिको सामु !!!!!!!!!!!!”
……………………. …………. …………………… ……………….. ………………… ……….
“सन्ध्या……………….. मेरो जीवनको लागि त्यो नाम मेरो जीवनको प्रहर जस्तै थियो उज्यालो छरिएको मेरो जीवनमा पनि त रात पर्न पर्न लागेको थियो !”
संगिता दिक्क लागेर सुतिसकेको पनि धेरै भइसक्यो तर प्रतिक भने वहन छोडेको छैन आज !!!!मलाइ लाग्छ यो रात प्रतिकलाइ बहनलाइ नै बनेको हो ! सकियो कि सकियो कि जस्तो लागेको थियो मलाइ अर्को कथा तर उसले अब अर्को अध्याय प्रारम्भ गरेको थियो ! ति अन्तर्निहित दुइ अध्यायहरु कहिले जोडिने हुन् मैले त्यो खुट्याउन सकिन तर उसको कथामा उसको अन्तर्द्वन्दले अर्को पात्र छिरी सन्ध्या ! सन्ध्याको आगमन प्रतिकलाइ कुशल…. उसको शब्दमा ……….. बनाउनलाइ भएको भनेर त भनि नै सकेको थियो !!!!
……………………………. …………………………… ………………………. …………….
“ मेरो विवशता थियो भन्न म सक्दिन , मेरो मुर्खता थियो भन्ने मलाइ आँट छैन ,खुशीको लागि ल्याइएकी थीइ भनेर म कसरी भनुँ ! जे होस् सन्ध्याको उपस्थिति हजारौँ सम्भावनाको विचमा मेरो जीवनमा भयो………………..
मैले टाउको हल्लाएँ , मलाइ एकछिन भए पनि सम्हालिनलाइ समय मिल्नेछ भनेर !!! उ आफुमा बुझिनसक्नुकी थिइ , उसका शब्दहरु सँधै नै अचम्मलाग्दा हुन्थे !!!! मलाइ अझै याद छ धेरै बेर नियालेर उसले भनेकी थिइ म भाग्यमानी छु ,,, मान्छे कुमारत्व हार्न म सँग जुवा खेल्छन् !!! मलाइ अझै थाहा छैन उसले के नियालेर उसले मेरो कुमारत्वको बारेमा पत्ता लगाइ !! मेरो साथीले भनेको होइन त्यसमा मलाइ विश्वास छ !!! उसको सामु म आए उसले केहि भोगि मैले केहि पाएँ यसमा म कसरी हारेँ त ????यहाँ त हारजित काहिँ थिएन तर खुशि लागेको पनि थियो मलाइ मेरो रुपलाइ म नामर्द को प्रतिमा बनाउन खोजिरहेको थिएँ त्यो कुमारत्व रहेछ सन्ध्याको परिभाषामा !!!!!”
………………………………………… ………………………………. ………………………………………. ………………………………….. …………………..।
……………………………. ………………………. …………………… …………………………….
म जस्तै रहेछ प्रतिकको साथी । प्रतिकले सँधै म जस्तै साथी हरु पाएको रहेछ मैले मनमनै सोचेँ । म मात्रै किन हरेक लोग्नेमान्छेको तराजु त्यस्तै हुन्छ । मलाइ थाहा छ प्रतिक जत्तिनै आफूलाइ अपवाद जनाउन खोजोस् । उसका भावना पनि केहि फरक छैनन् , उसको कथाको अनुवाद उ तिर ढल्केर मात्रै हो नत्र उसको पनि तराजु केहि फरक छैन । उ पनि उहि घेरा भित्रको लोग्नेमान्छे हो पक्कै पनि खुशी यति राम्री थिइ कि उ खुशीको तर्फबाट पनि सोच्न बाध्य थियो , खुशी यति अलौकिक थिइ कि खुशीका आकांक्षाहरु लाइ उसको रुपको ओजस्व मा उसले देख्न सकेन । खुशि टल्किएकि नै हुँदि हो जसले गर्दा प्रतिक ले खुशि भित्रका नबोलिएका आग्रहहरु देख्न सकेन ।अनि देख्दै नदेखेका आग्रहहरु त उ पुर्याओस् पनि कसरी ?…………
……………………… ……………………….. …………………… ………………………… ………………………. …………………….. …………………….. …………………….।
…………………………. ………………………. …………………… …………………….. ………………… …………………… …………………………….. …………………………. …………………………. …….
उसले टाउको हल्लायो !! अनि हाँस्यो “ हुन त धेरै भयो दाइ तर तँपाइले भनेको केहि भएन !! मलाइ खुशीको दाँजोमा आफूलाइ उभ्याउनु थियो !!!”
………………. …………………. …………………… ………………………… ………………………….. ………………. ………………….. …………………….. …………………….. ……………………..
मलाइ लाग्यो यी दुवै कथाहरु अब बेरिँदैछन् मेरो जीवनमा जसले जब घाँटी समाउनेछ म ति मध्ये एउटा पनि चुट्याउन सक्ने छैन !!!मेरो अन्त्य नजिकिँदै छ । अनि अचानक मैले कलम झिके खुशीलाइ एउटा लामो चिठ्ठि लेखेँ ! चिठ्ठिलाइ लुकाएँ , अनि मोबायल बाट एसएमएस गरेँ खुशिलाइ एउटा चिठ्ठी छ तिम्रो नाममा लुकाएर राखेको भनेर , मोबायल छोडेर !!!!!!!!!!!!! अनि हिँडे एउटा यात्रामा म सँग शब्दहरु थिएनन् उसलाइ दिने ! प्रतिक ठिक भन्थ्यो जीवन रित्तो भए कति रमाइलो हुन्थ्यो सम्बन्ध माथी सम्बन्धका बोझ हुन्नथे !!
मैले संगितालाइ बोलाएँ “त्यो तेरो पल्लो गाउँको काले काले केटा सँगको हल्ला साँचो हो ?” उसले मलाइ अचम्म मानेर हेरी !!!!
03-13-10 9:32 AM